सेयर कारोबारमा दिनदिनै नयाँ कीर्तिमान ? यस्तो छ कारण ! – सुनाखरी न्युज
सेयर कारोबारमा दिनदिनै नयाँ कीर्तिमान ? यस्तो छ कारण !
Posted on: November 23, 2020 - 7:29 am
पछिल्लो समय लगातार बढ्दै गएको बजारमा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदा कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गएको छ । आइतबार सेयर बजारमा कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । आइतबार बजार बन्दहुँदा ६ अर्ब ९० करोड ६७ लाख रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ ।
कारोबार सुरु भएदेखि नै उतारचढाव देखिएको नेप्से परिसूचक कारोबार बन्द हुँदा भने ४ दशमलव ६९ अंकले बढेर १ हजार ७ सय ८२ दशमलव ८१ अंकमा बन्द भएको छ । दिनभर नेप्सेमा करिब ५० अंकको उतारचढाव देखिएको छ ।गत साता बिहीबार एकैदिन ६ अर्ब ११ करोड ६७ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएर नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो । उक्त रेकर्डलाई आइतबारको कारोबारले तोडेको छ । बजारमा २ सय १ कम्पनीको ६३ हजार ५ सय ७० पटकको कारोबारबाट १ करोड ६० लाख ३४ हजार ७ सय १७ कित्ता सेयर खरिदविक्री भएको छ ।
सेन्सेटीभ परिसूचक पनि २ अंकले बढेर ३ सय ४५ अंकमा बन्द भएको छ । कारोबारमा आएका समूह मध्ये बैंकिङ, विकास बैंक र अन्य समूह बाहेकका सबै समूहका सूचकहरु घटेका छन् । यसअघिका दिनहरुमा व्यापार, बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन र अन्य समूहबाट कमाइरहेका लगानीकर्ताहरु ती क्षेत्रको सेयर विक्री गरी बैंक तर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ ।